KS-9008 Standard OA FFP2 N ...
Spec:Na-enweghị Exhalation Valve
Mbukota:1pc / akpa rọba, 25 PC / igbe, 40 igbe / ctn ma ọ bụ dị ka kwa ahịa 'mkpa
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa:25 PC / igbe, 1000 PC / katọn
1. Ọzọ mara mma imewe ịke na multi-oyi akwa ihe nchebe, nke nwere ike iyo ahụ rụọ ọrụ nke ọma na-akpali peculiar isi, ájá, nje na nje.
2. Multi-oyi akwa mesikwuru filtration, inweta anụ-enyi na enyi oyi akwa, elu na-abụghị kpara akwa, meltblown oyi akwa, na nyo oyi akwa.
3.3D akụkụ atọ nwere ike ịhazigharị ihe kwesịrị ekwesị na ihu, melite mmetụta nchedo, enweghị ntụpọ, enweghị mkpuchi ultrasonic, enweghị mgbatị, mgbatị na-agbanwe agbanwe, ụdị mgbanwe dị elu adịghị emerụ anụ ahụ, ogologo oge abụghị sie ike, ma wears ọzọ Nkasi obi.
4. The electrostatic adsorption interlayer nwere ike adsorb particulate okwu, na ndị ọzọ n'ígwé nke oru oma nzacha oyi akwa site oyi akwa chebe ume ume.
KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Na ntinye ume)
Nnukwu arụmọrụ megide aerosols na-enweghị mmanụ. Igwe iku ume a na - enyere aka ichebe ụfọdụ
ihe na-emetọ ma ọ naghị ewepụ ma ọ bụ ihe ọghọm ibute ọrịa ma ọ bụ
oria. Iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi pụrụ ịkpata ọrịa ma ọ bụ ọnwụ.
Masks ndị a na-arụ ọrụ nke ọma bụ:
Hypoallergenic / High Filtration ikike
Wepu Mpaghara Kwadoro
Uzuzu Pollen Nchedo
1.Direct emeputa na-ekwe nkwa ezi uche price na magburu onwe ya mma
2.5 ply design iji nwee ike igbochi ájá na nje
3.Packing 25pcs / igbe, 1000pcs / katọn, nakwa dị ka nwere ike ịbụ kwa ahịa '
4.Certifates ISO / CE / SGS / CNAS etc asambodo ikwu & ule nyocha.
5. anyị nwekwara ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, dịka n'ụdị valvụ, ụdị ekwekọ carbon, arụ ọrụ ụdị ntị na ihe ndị ọzọ ...
3.Packing 20pcs / igbe, 800pcs / katọn, nakwa dị ka nwere ike ịbụ kwa ahịa 'chọrọ
5. anyị nwekwara ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, dịka enweghị ụdị valvụ, ụdị ekwekọ carbon, mmegharị ntị dị iche iche na ihe ndị ọzọ ...
Ejiri KN95 iji na-eku ume ume iji nye aka na-echebe megide ụmụ irighiri ihe ndị na-abụghị mmanụ, bụ ndị sitere n'ọka, sanding, sawing, ma ọ bụ ọrụ uzuzu ndị ọzọ. O nwekwara ike inye aka belata ikpughe inhalation na ụfọdụ ihe ndị dị ndụ.
GB2626-2006, GB2626-2019 KN95 NA VALVE
Okwu mmalite nke KN95
Product aha: PM2.5 atọ akụkụ ọcha osisi echebe nkpuchi
Nkọwapụta ngwaahịa: 10.5 × 16cm
Ihe mejupụtara: akwa gbazee electrostatic fụrụ akpụ + akwa dị elu na-enweghị akwa, imi imi nwere ike wuo, mpụga, valvụ iku ume, eriri ntị dị mma
Cdị nka: ergonomic design, ultrasonic okpomọkụ akara
Ihe ndozi mgbe niile: ọcha, customizable
Ọrụ ndị bụ isi: gbochie ájá, haze, PM2.5, pollen